कोरोना समाप्त होस् भन्दै विशेष पूजा पशुपतिमा; ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस् पशुपतिनाथ ले रक्षा गर्नेछन्! – Khabar PatrikaNp
Prevदुनियाँ चकित भएको चोरी काण्ड, झनै चकित त त्यतिबेला भयो चोर भैंसीले पत्ता लगायो !
नायक पल शाहलाई डेराभाडा तिर्ने पैसा नहुँदा घरभेटीले निकाली दिएका थिए (भिडियो)
स्वस्तिमाले भनिन्, तिम्रोमा अन्तरवार्ता दिन आईन्न बरु बुढो बोकेर हिडिन्छ
प्रचण्ड लाटोकोसेरो हुन्, दिउसो आँखा देख्दैनन्’ – केपी शर्मा ओली
इजरायलले पहिलोपटक नर्सिङ क्षेत्रका लागि संस्थागत रूपमा पाँच सय नेपाली लैजाने
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22656)
एका बिहानै बिसाल नाग देवताको दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ (21259)